ယောက်ျားတိုင်း ကြိုးစားကြည့်သင့်တဲ့ Sex Position ငါးမျိုး – Gentleman Magazine
သွေးဟာ သင့်ရဲ့ ခေါင်းနှစ်ဖက်စလုံးကို စီးပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့ လက်တွေနဲ့ ပခုံးကို ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာထားပါ။ သူမကို သင့်အပေါ်ကနေခွထိုင်ပြီး ကုတင်အစွန်းကို ရွှေ့လာခိုင်းပါ။ သွေးဟာ သင့်ဦးခေါင်းကို စီးပြီး သင် ပြီးဆုံးတဲ့အခါ လှပကောင်းမွန်တဲ့ မကြုံဖူးတဲ့ ခံစားချက်တွေကို ရရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကြယ်ငါးပွင့် Position ပါ။
၂. လက်ဆောင်ထုပ် ဖြေခြင်း
ပိုပြီး ထိုးဖောက် ဝင်ရောက်နိုင်မယ့် နွေးထွေးပွေ့ဖက်နိုင်တဲ့ သက်တောင့်သက်သာ ပုံစံလေးပါ။
သင်တို့နှစ်ယောက်လုံး တစ်ယောက်ဘက်ကို တစ်ယောက် ဘေးစောင်းလှဲနေပါ။ သူမကို ကိုယ်လုံးလေးကို ကွေးနေစေပြီး ခြေကို ခွဲထားခိုင်းပါ။ သူမရဲ့ ပန်းလေးကို သင့်ဘက် လှည့်ထားခိုင်းပါ။ သင်ခြေထောက်တွေကို သူမခြေထောက်ကြားထဲထားပြီး ထိုးဖောက်ဝင်ရောက်နေတုန်း သူမခြေထောက်တွေနဲ့ သင့်နောက်ကျောကို ယှက်ထားခိုင်းပါ။
ဆက်ဆံနေစဉ်မှာ သူမဟာ သူမရဲ့ခြေထောက်တွေကို သုံးပြီး သင့်ကို ပိုနီးကပ်လာအောင် ပိုထိုးဖောက်နိုင်အောင် လုပ်ပေးနိုင်ပါသေးတယ်။
ကြယ်နှစ်ပွင့် Position ပါ။
ပထမဆုံးအကြိမ် ချစ်တင်း နှောရာမှာအဆင်ပြေစေဖို့
၃. မျက်နှာပေါ်ထိုင်ခြင်း (ခ) ပုဇဉ်းပျံ
သူမအတွက် သက်တောင့်သက်သာ ရှိတဲ့ ပုံစံလေးပါ။ သင့်အတွက်ကတော့ စိတ်ကြွစေပါတယ်။
သူမဦးခေါင်းအောက်မှာ ခေါင်းအုံး တစ်လုံး ထားပါ။ သူမရဲ့ ပခုံးတွေအပေါ်မှာ ခွပေးလိုက်ပါ။ သင့်ကိုယ်သင် ထိန်းနိုင်ဖို့ နံရံ ဒါမှမဟုတ် ကုတင်တန်းကို ကိုင်ထားပါ။
ကြယ်သုံးပွင့် Position ပါ။
သူမကို မြန်မြန်ပြီးစေနိုင်ပြီး လှုပ်ရှားမှု လွယ်ကူစေပါတယ်။
သင်က ခြေနှစ်ဖက်ကိုကားပြီး လက်နှစ်ဖက် နောက်ပစ်ပြီး ထိုင်နေလိုက်ပါ။ သူမရဲ့ ခြေနှစ်ချောင်းကို သင့်ပခုံးပေါ်တင်ပြီး လက်နောက်ပြန်ထောက်ပြီး ထိုင်ခိုင်းလိုက်ပါ။ အဲဒါဟာ ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှုကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး သူမအတွက် ပြီးဆုံးမှု မြန်စေပါတယ်။ သူမရဲ့ တင်ပါးကို မပေးခြင်းဖြင့် သူမကို စက်ဝိုင်းပုံစံ လှုပ်ရှားစေနိုင်ပါတယ်။
၅. နှင်းတမန်တော် (ခ) အထက်အောက်
ဒီပုံစံနဲ့ဆို သူမက သင်ကောင်းနေတာနဲ့ သင့်တင်ပါးကို မြင်ရစေပါတယ်။
ဒါက နည်းနည်းခက်ပါတယ်။ သူမကို ပက်လက်လှဲနေစေပြီး သင်က သူမလှဲနေတာနဲ့ပြောင်းပြန် သူမပေါ်ကနေ ခွမှောက်လိုက်ပါ။ သူမရဲ့ ခြေထောက်တွေကို သင့်ကျောပေါ် ရစ်ပါတ်ထားစေခြင်းဖြင့် သူမရဲ့ တင်ပါးကို ကြွစေပြီး သင် အထဲကို ဝင်ရောက်နိုင်မှာပါ။ ပြီးတော့ သူမကို သင့်တင်ပါးကို ကိုင်စေပြီး သင် ရှေ့တိုးနောက်ငင် လှုပ်ရှားဖို့ ကူညီပေးပါ။ သူမက သင်ပိုပြီးကောင်းအောင် သင့်တင်ပါးကို ဖျစ်ညှစ်ပေးစေနိုင်ပါတယ်။
ကြယ်လေးပွင့် Position ပါ။
ယောကျြားတိုငျး ကွိုးစားကွညျ့သငျ့တဲ့ Sex Position ငါးမြိုး
သှေးဟာ သငျ့ရဲ့ ခေါငျးနှဈဖကျစလုံးကို စီးပါလိမျ့မယျ။
သငျ့ရဲ့ လကျတှနေဲ့ ပခုံးကို ကွမျးပွငျပျေါမှာထားပါ။ သူမကို သငျ့အပျေါကနခှေထိုငျပွီး ကုတငျအစှနျးကို ရှလေ့ာခိုငျးပါ။ သှေးဟာ သငျ့ဦးခေါငျးကို စီးပွီး သငျ ပွီးဆုံးတဲ့အခါ လှပကောငျးမှနျတဲ့ မကွုံဖူးတဲ့ ခံစားခကျြတှကေို ရရှိမှာ ဖွဈပါတယျ။
ကွယျငါးပှငျ့ Position ပါ။
slide-2_0၂. လကျဆောငျထုပျ ဖွခွေငျး
ပိုပွီး ထိုးဖောကျ ဝငျရောကျနိုငျမယျ့ နှေးထှေးပှဖေ့ကျနိုငျတဲ့ သကျတောငျ့သကျသာ ပုံစံလေးပါ။
သငျတို့နှဈယောကျလုံး တဈယောကျဘကျကို တဈယောကျ ဘေးစောငျးလှဲနပေါ။ သူမကို ကိုယျလုံးလေးကို ကှေးနစေပွေီး ခွကေို ခှဲထားခိုငျးပါ။ သူမရဲ့ ပနျးလေးကို သငျ့ဘကျ လှညျ့ထားခိုငျးပါ။ သငျခွထေောကျတှကေို သူမခွထေောကျကွားထဲထားပွီး ထိုးဖောကျဝငျရောကျနတေုနျး သူမခွထေောကျတှနေဲ့ သငျ့နောကျကြောကို ယှကျထားခိုငျးပါ။
ဆကျဆံနစေဉျမှာ သူမဟာ သူမရဲ့ခွထေောကျတှကေို သုံးပွီး သငျ့ကို ပိုနီးကပျလာအောငျ ပိုထိုးဖောကျနိုငျအောငျ လုပျပေးနိုငျပါသေးတယျ။
ကွယျနှဈပှငျ့ Position ပါ။
ပထမဆုံးအကွိမျ ခဈြတငျး နှောရာမှာအဆငျပွစေဖေို့
၃. မကျြနှာပျေါထိုငျခွငျး (ခ) ပုဇဉျးပြံ
သူမအတှကျ သကျတောငျ့သကျသာ ရှိတဲ့ ပုံစံလေးပါ။ သငျ့အတှကျကတော့ စိတျကွှစပေါတယျ။
သူမဦးခေါငျးအောကျမှာ ခေါငျးအုံး တဈလုံး ထားပါ။ သူမရဲ့ ပခုံးတှအေပျေါမှာ ခှပေးလိုကျပါ။ သငျ့ကိုယျသငျ ထိနျးနိုငျဖို့ နံရံ ဒါမှမဟုတျ ကုတငျတနျးကို ကိုငျထားပါ။
ကွယျသုံးပှငျ့ Position ပါ။
သူမကို မွနျမွနျပွီးစနေိုငျပွီး လှုပျရှားမှု လှယျကူစပေါတယျ။
သငျက ခွနှေဈဖကျကိုကားပွီး လကျနှဈဖကျ နောကျပဈပွီး ထိုငျနလေိုကျပါ။ သူမရဲ့ ခွနှေဈခြောငျးကို သငျ့ပခုံးပျေါတငျပွီး လကျနောကျပွနျထောကျပွီး ထိုငျခိုငျးလိုကျပါ။ အဲဒါဟာ ကွှကျသားလှုပျရှားမှုကို ပိုမိုကောငျးမှနျစပွေီး သူမအတှကျ ပွီးဆုံးမှု မွနျစပေါတယျ။ သူမရဲ့ တငျပါးကို မပေးခွငျးဖွငျ့ သူမကို စကျဝိုငျးပုံစံ လှုပျရှားစနေိုငျပါတယျ။
၅. နှငျးတမနျတျော (ခ) အထကျအောကျ
ဒီပုံစံနဲ့ဆို သူမက သငျကောငျးနတောနဲ့ သငျ့တငျပါးကို မွငျရစပေါတယျ။
ဒါက နညျးနညျးခကျပါတယျ။ သူမကို ပကျလကျလှဲနစေပွေီး သငျက သူမလှဲနတောနဲ့ပွောငျးပွနျ သူမပျေါကနေ ခှမှောကျလိုကျပါ။ သူမရဲ့ ခွထေောကျတှကေို သငျ့ကြောပျေါ ရဈပါတျထားစခွေငျးဖွငျ့ သူမရဲ့ တငျပါးကို ကွှစပွေီး သငျ အထဲကို ဝငျရောကျနိုငျမှာပါ။ ပွီးတော့ သူမကို သငျ့တငျပါးကို ကိုငျစပွေီး သငျ ရှတေို့းနောကျငငျ လှုပျရှားဖို့ ကူညီပေးပါ။ သူမက သငျပိုပွီးကောငျးအောငျ သငျ့တငျပါးကို ဖဈြညှဈပေးစနေိုငျပါတယျ။
ကွယျလေးပှငျ့ Position ပါ။
Previous: ၀မ်းဗိုက်ကြွက်သားလှပဖို့ သိပံ္ပနည်းကျအချက်အလက်များ